MiomÃ na hirotsaka an-dalambe amin'izay! | Hevitra MPANOHARIANA |
MiomÃ na hirotsaka an-dalambe amin'izay!
2009-10-06 @ 20:56 in Politika
Misy fotoanany avokoa ny zava-drehetra. Teo aloha aho dia tsy nanaiky na oviana na oviana ny hirotsahan'ny mpomba an-d Ravalomanana Marc an-dalambe, tsy nekeko ny fitsenana teny Ivato sy ny fandehanana eo anoloan'ny Hotel Carlton ny andron'ny talata 6 oktobra 2009. Niezaka ny hanatratra ny fanombohan'ny hogahogan'ny Otrik'afo sy ny tariny aho tamin'io andron'ny talata io. Tsy hitako izany baomba mandatsa-dranomaso izany, tsy hitako izany sora-baventy manohitra an'i Andry Rajoelina izany. Ireny sora-baventy nanonona an'i Andry Rajoelina ireny no tsy zakan'ny mpitandro ny filaminana ka noraofiny ary tsy tratrako rehefa noheveriko.
Dia toa mbola nijanona teo an-toerana ihany ny roa tonta. Notsinjoviko aloha fa raha ny fijery azy teo dia ny mpitandro ny filaminana no maro an'isa kokoa noho ny mpanao fihetsiketsehana teo ampita. Tsy nampaninona an-dry zareo anefa ny hoe SADC OUT sy ny GIC OUT. Toa misy fifanarahana miafina efa vita tany ho any ka nahatonga ny filoha Ravalomanana nitroatra an-gazety mandrakariva mitsipaka izany fanapahan-kevitra toa efa voaomana mialoha izany.
Toy ny efa ivelan'ny sehatra i Monja Roindefo aloha amin'izao fotoana izao. Miasa mafy ny hery sasany hahafilohan'ny tetezamita an'i Andry Rajoelina amin'izay. Nisinisy ihany anefa amin'ny mpanohana azy teo no nanam-pahatezerana taminy ihany. Heveriko noho izany, fa raha tsy zakan'ny mpitandro ny filaminana ka noraofiny ny sora-baventy manohitra an'i Andry Rajoelina dia nisy baiko tany ambadika tany hanaisotra ireny sora-baventy ireny. Izay no fanararaotra ary tokony ho ny andron'ny alarobia 07 oktobra 2009 no hanaovana ity hetsika ity! Sorabaventy mitsipaka an'i Andry Rajoelina, manohitra ilay zalahy io tsy ho filohan'ny tetezamita na oviana na oviana. Raha tsy nisambotra mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana ny talata fa nanaparitaka fotsiny dia tsy tokony hisambotra ihany koa ry zareo ny andron'ny alarobia. Tohero ny mpanimba zavatra fa tsara ho hitan'ny vahiny amin'izay ny tsy fankasitrahana izany lehilahy antsoina hoe Andry Nirina Rajoelina izany.
Izay ihany no takiantsika fa tsy hitaky zavatra hafa aloha isika. Izay no soso-kevitro, manaraka ny vanim-potoana, koa anjaran'ny tsirairay no mieritreritra. Misy ihany ny olana: iza no mpitarika sahy hosamborina, ka tsy mandositra miala mihitsy fa toa tsy mba nosamborina i Rajaonah Andrianjaka filohan'ny Otrikafo? Olana faharoa: tsy manana haino aman-jery ahafahana manentana io fihetsiketsehana an-dalambe eny Anosy io isika. Haino aman-jery manentana vetivety ny olona ho tonga eny Anosy tsy hanaiky an'i Andry ihany no ilaina amin'izao fotoana izao, fa tsy miresaka GIC na SADC. Now is the Time!
Fanamarihana: Ny zava-dehibe eto dia ny hamoahana ny hevitsika na dia hiharihary aza fa horavana ny hetsika atao. Na ferana ho ora iray ihany ny fotoana. Ora mahafaka ny rehetra no kendrena ary tafita amin'ny rehetra ny hafatra!
jentilisa, 6 oktobra 2009, amin'ny 23:00 ora Antananarivo